Alexei Antonov sy ny sangan'asany manokana 'La rosa' | Famoronana an-tserasera
Miverina amin'ny hosodoko solika miaraka amin'i Alexei Antonov sy ilay sombiny manokana «Ny raozy» isika. Asa iray ankafizinao ahoana ny fiakaran'ny tetikasa maivana amin'io rose io izay ny voninkazo ihany no mandray ny loko voahodidin'ny hatsiaka amin'ny tonony, ny tsilo amin'ny raviny ary io siny manohana azy io.
Amin'ny làlana io ahoana no fiasan'ny mazava izay ahafahanao mankafy ny asan'i Antonov hitarika anay amin'ny asa kanto iray izay maneho fanoloran-tena lehibe amin'ny fitiavan-tena ary mety hampahatsiahy izany fahasamihafana izany avy amin'ny Beauty and the Beast.
Mpanakanto Rosiana 59 taona efa miasa amin'ny magazine isan-karazany amin'ny fanaovana sary an-tsary sy mpanakanto sary ary afaka mahita sanganasa avo lenta kokoa izay mitady hyper-realism amin'ny sasany amin'izy ireo, handalo alohan'ny hafa izay mitady fanandramana. Avy amin'ny biolojiny no nanamarihany fa nandoko tamin'ny tànany avy hatrany izy satria nirehareha nitady fomba hafa hanatonana ny kanto sy ny fombany.
Niasa tamina vondrona mozika rock sy pop izy ary toy izany hatrany mianatra ny kilasika toa an'i Rubens, Van Dyke sy Snyders. Miaraka amina fomba iray izay mitodika any amin'ny kilasika ary tsikaritra amin'ny asany tsirairay avy, dia monina any Etazonia izy izao, izay namela azy hizara ny ampahany amin'ny asany.
Hoso-doko menaka somary manan-danja ho an'izany marefo sy mahatsapa fahatsapana izany dia hita amin'ny ankapobeny ary amin'ireo antsipiriany ireo izay azo jerena, miampy inona izany spotlight avy any ambony izany izay tratra tsara.
Ianao dia manana ny tranonkalanao for fantaro ny asany sisa ary araho izy ny facebook-nao hihaino tsara ny fivoaran'ny sanganasa manaraka.
Ho an'ny faritra hafa fa amin'ny solika, ny sarimihetsika momba an'i Van Gogh.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Ny Rose' amin'ny solika avy amin'i Alexie Antonov